သင်၏ iPhone စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဘက်ထရီပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း Geekbench ကအတည်ပြုသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Geekbench ကသင့်ရဲ့ iPhone စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဘက်ထရီကိုမှီခိုနေကြောင်းအတည်ပြုလိုက်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲသောအခါသူတို့၏ "ဟောင်းနွမ်းသော" အိုင်ဖုန်းဟောင်းပြန်လည်နိုးထလာကြောင်းသတင်းပို့သူများမည်သို့ရှိကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည်။ iOS 11 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်နှစ်နှစ်ကျော်သောမော်ဒယ်များကိုရုတ်တရက်အသက်ကြီးလာစေပြီး၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသောအခါနှေးကွေးသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကရိုးရှင်းတဲ့ဘက်ထရီပြောင်းလဲမှုကသူတို့ကိုနုပျိုစေခဲ့တယ်.
၎င်းသည်ဘက်ထရီသည်ကိရိယာ၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလား။ သင်မွမ်းမံသည့်အခါနှင့် iPhone သည်ယခင်ထက်နှေးကွေးသည့်အခါသာမန်အရာမှာ software သည်ကောင်းမွန်စွာမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပရိုဆက်ဆာလုံလုံလောက်လောက်မရှိတော့ခြင်းနှင့်သင်ပိုမိုခေတ်မီသော iPhone တစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားသင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အသုံးပြုသူရဲ့စမ်းသပ်မှုအရဘက်ထရီဟာတရားခံလို့ထင်ရပါတယ် Geekbench မှစမ်းသပ်ပြီးသည့်နောက်အတည်ပြုနိုင်သည်.
အရာခပ်သိမ်းသည်ယခင် iOS 10 ဗားရှင်းမှစတင်နေပုံရသည်။ iPhone6နှင့် 6s အသုံးပြုသူများသည်ရုတ်တရက်ဘတ္ထရီဖြင့်ပိတ်ထားသည့်အခါရုတ်တရက်ကုန်သွားသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးယင်းကို၎င်းကိုယ်တိုင်ကညွှန်ပြသော iOS XNUMX နှင့်စတင်သည်။ အက်ပဲလ်ဟာအဆင့်နိမ့်တဲ့ဘက်ထရီနဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပရိုဆက်ဆာကိုနှေးကွေးစေခဲ့တယ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလျော့မသွားစေရန်နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲရပ်တန့်နေသောဤပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ တိကျတဲ့ bug တစ်ခုအတွက်အဖြေတစ်ခုက feature တစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊
iPhone အား Low Power mode တွင်ထားသောအခါသင်ဘာသတိထားမိသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ အလွန်ဆင်တူသောအရာသည်အက်ပဲလ်ကဲ့သို့ပင်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ယုတ်ညံ့သည့်ဘက်ထရီရှိကြောင်းသတိပြုမိသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခြင်းမရှိပဲပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းမနှစ်သက်သောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Apple ကသတိပေးချက်တစ်ခုအနေဖြင့်သင့်အားသတိပေးနေ သ၍ ယုတ္တိရှိပုံရသည်ထို့အပြင်ဤကျဆင်းမှု၏အကြောင်းရင်းကိုညွှန်ပြ။ ၎င်းကိုသိသောသုံးစွဲသူများသည်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်၊ iPhone ပြောင်းလဲခြင်းထက်များစွာသက်သာသည်။ သို့မဟုတ်ပါက Apple ကကျွန်ုပ်တို့အားအလိုရှိစေလိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Geekbench ကသင့်ရဲ့ iPhone စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဘက်ထရီကိုမှီခိုနေကြောင်းအတည်ပြုလိုက်သည်
piss နှင့် drop မ jajajajajajjahahahahhahahaha!
Apple update ကအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ Apple updates က devices အဟောင်းကိုနှေးစေတယ်၊ ​​အသုံးပြုသူကဟောင်းနေပြီ၊
တရားဝင် Reddit ဖောက်သည်အားအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များထပ်မံဖြည့်စွက်သည်
Infuse5သည်လျှောက်လွှာ၏စျေးနှုန်းကိုသက်တမ်းတိုးစေပြီးသတင်းကောင်းမဟုတ်ပါ